Gud. Gobalka Bari oo eedeyn kulul u jeediyay Shaqsiyaad uu ku jiro Gen.C/lahi Siciid – SBC
Gud. Gobalka Bari oo eedeyn kulul u jeediyay Shaqsiyaad uu ku jiro Gen.C/lahi Siciid
Posted by admin on February 9, 2013 Comments
Shir Jaraa’id oo uu ku qabtay Xarunta Gobolka Bari Gudoomiyaha Gobolka C/samad Maxamed Galan ayaa waxaa uu kaga hadlay Xaalada amaan ee magaalada Boosaaso iyo Dhacdooyinkii ugu danbeyay ee Boosaaso ka dhacay todobaadyadii tagay ee iskugu jiray dibadbaaxyo iyo dhacdo weerar ah oo xalay ka dhacday Gudaha Magaalada.
Gudoomiye C/samad Maxamed Galan ugu horeyn waxaa uu sheegay in tan iyo bilowgii Bishan in ay Magaalada Boosaaso ay ka wadaan koox la yaqaan abaabul Dagaal iyo Ciidamo soo xareyn iyo kicin bulsho ay ka wadeen Maaamulkana uu mudddo dheer u digay ayna taasi qaaadan waayeen.
C/samad Galan waxaa u sheegay in Dowladu taalaabo Cad ka qaadi doonto Cid kasta oo Falal Amaan diri ka geysta Boosaaso isaga oo si gaar ah u soo qaatay inay Howshan Ka wadaan Boosaaso C/laaahi Saciid Samatar Wasiirkii hore ee Amniga Puntland iyo Liibaan Muus Boqor Kuwaasi oo uu sheegay inay Dowladu Sharciga hor keeni doonto.
Dhinaca kale Gudoomiyaha Gobolka Bari waxaa uu ku eedyay weerar xalay Ciidamada Dowlada iyo Koox hubeysan ku dhexmaaray Boosaaso inay Abaabulkeeda wax ku laayahayeen Shaqsiyaaadka uu gudoomiyaaha ku xusay Shir saxaafadeedkiisa isaga oo sheegay inay Baaritaano wadaan.
Shaqsiyaadka lagu magacaabay shir saxaafadeedkan ayaa horey u sheegay inay sameysteen Urur Loogu magac daray samatabixinta Puntland kaasi oo lagu dhisay qardho waxaana maanta ay iska fogeeyeen eedeynta Gudoomiyaha Gobolka Bari ee ah inay wadaan falal amaanka lidi ku ah.
DHAGEYSO SHIR SAXAAFADEEDKA GUDOOMIYAHA GOBOLKA BARI C/SAMAD MAXAMED GALAN